जेबिल्स फाइनान्सको ४०% हकप्रद सेयर खुला, कहिले सम्म पाइन्छ भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » जेबिल्स फाइनान्सको ४०% हकप्रद सेयर खुला, कहिले सम्म पाइन्छ भर्न ?
काठमाडौं - जेबिल्स फाइनान्सको ४०% हकप्रद सेयर आइतबारदेखि बिक्री खुला भएको छ । कम्पनीले १०ः४ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको २३ लाख ११ हजार ६५० कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । यस हकप्रदमा जेठ २२ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले साउन १३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल कमलपोखरी, काठमाडौं तथा जेबिल्स फाइनान्स न्यूरोड, काठमाडौंबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । त्यसैगरी, सनराइज बैंकको विराटनगर, पोखरा, वीरगञ्ज, बुटवल र नारायणगढ शाखा कार्यालय तथा धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि भर्न सकिनेछ । हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५७ करोड ७९ लाख १२ हजार ५०० रुपैयाँ छ । ४०% हकप्रदपछि चुक्ता पुँजी ८० करोड ९० लाख ७७ हजार ५०० रुपैयाँ पुग्नेछ ।